९ वटा बीमा कम्पनीले १०० रुपैंयामा नै शेयर जारी गर्दै, कसको कति ? | ictkhabar
30 minutes ago बैंकका कर्मचारीलाई ५ महिनासम्मको बोनस, कुनले कति दिए ?
९ वटा बीमा कम्पनीले १०० रुपैंयामा नै शेयर जारी गर्दै, कसको कति ?
Nov Thu 2020 12:25:43
बीमा कम्पनीहरूले सर्वसाधारणको लागि साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । नयाँ ९ बीमा कम्पनीले ५ अर्ब ६५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर जारी गर्न लागेका हुन् । कम्पनीहरूले ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको लागि छुट्याउनु पर्ने कानुनी प्रावधानका कारण उक्त मूल्य बराबरको सेयर निष्कासन गर्न लागेका हुन् । कम्पनीहरूले उक्त आईपीओ पास गराउन धमाधम साधारणसभा गर्ने गराउने क्रममा रहेका छन् ।
बीमा समितिले गरेको प्रावधान अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरूले २ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ अर्ब पुँजी पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । सोही प्रावधान अनुसार सिटिजन लाइफ, आईएमई लाइफ।, ज्योति लाइफ, महालक्ष्मी लाइफ, प्रभु लाइफ, रिलायवल नेपाल लाइफ, सानिमा लाइफ, सन नेपाल र युनियन लाइफले आइपीओ जारी गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
नयाँ बीमा कम्पनीमध्ये अजोड, सानिमा जनरल, जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल र रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले सर्वसाधारण शेयर जारी गरिसकेका छन् ।
आईपीओ निष्काशन गर्न बाँकी ९ वटा नयाँ बीमा कम्पनीमध्ये सिटिजन लाइफले ७५ करोड, युनियन लाइफले ६४ करोड ५० लाख, आईएमई लाइफले ६० करोड, ज्योति लाइफले ६६ करोड मूल्य बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्न लागेका हुन् । महालक्ष्मी लाइफले ६० करोड, प्रभु लाइफले ६० करोड , रिलायवल नेपाल लाइफले ६० करोड, सानिमा लाइफले ६० करोड, सन नेपाल लाइफले ६० करोड रुपैंयाको आइपीओ जारी गर्नेछन् ।
आईपीओ जारी भएपछि सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ५० करोड, ज्योति लाईफको २ अर्ब २० करोड, युनियन लाईफ इन्स्योरेन्सको २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पूँजी पुग्नेछ । त्यस्तै आईपीओ जारी पश्यात सानिमा, प्रभु, रिलायवल, आईएमई, महालक्ष्मी र सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको चुक्ता पूँजी २ अर्ब पुग्नेछ ।